Sunday August 23, 2020 - 12:49:51 in Wararka by Mogadishu Times
Markii la waayay suxufigii caanka ahaa ee u dhashay Sucuudiga oo markii u dambeysay galay gudaha Qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay Istanbuul 2-dii bishii October ee sanadkii 2018-kii, reer Galbeedku waxay ka laba-labeynayeen in uu rumeysto warkii ka
Markii la waayay suxufigii caanka ahaa ee u dhashay Sucuudiga oo markii u dambeysay galay gudaha Qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay Istanbuul 2-dii bishii October ee sanadkii 2018-kii, reer Galbeedku waxay ka laba-labeynayeen in uu rumeysto warkii kasoo baxayay Madaxtooyadda Turkiga ee ahaa, Jamaal Khashoggi in la dilay meydkiisana la cirib tiray. Labo todobaad ayaa la dhaafay ka hor inta aysan wakiil wareedka New York Times Carlotta Gall ku eedeysay Madaxtooyadda Turkiga in ay adeegsaneyso akhbaar dusin gaar ah, si ay cadaadis u saarto Dowladda Sacuudiga. Iyadoo shaki ka muujineysa faah-faahinta ah in Khashoggi la dilay, ayey Gall qortay 19-kii October ee sanadkaas "Muxuu Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ka aaminsanyahay qadarta ku dhacday suxufiga?" "Kiiska miyaa ah fursad muddo la sugayay, marka uu warbaahin gaar ah uu siinayo faah-faahinta kiiska, Dowladda Mr, Erdogan qudheeda ayaa markii horeba cadaawad kula jirtay suxufiyiinta madaxa banaan," ayey qortay. Waxaa beegdsaday Tiger Squad
"Dad yar ayaa Dr Saad Al Jabri uga xiriir dhow sirdoonka Maraykanka iyo hey’adihiisa amniga,” ayaa lagu yiri Dacwadda. "Inkastoo tobanaan sano wada shaqayn dhow uu la lahaa saraakiil sare ee argagixiso la dirirka, Dr Saad waxaa uu noqday saaxiib la’aanimay kaasi oo akhbaartiisa iyo taladiisa la raadiyo ka hor inta aan la qaadan go’aanadda nolol iyo geeri ee amniga qaranka Maraykanka.”
Markasta, Jabri waxaa uu heystaa taageero cad. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa u sheegay Middle East Eye "Saad Al-Jabri waa saaxiib qiimo ugu fadhiya argagixiso la dirirka Maraykanka. Shaqada Saad waxay Maraykanka ka caawisay badbaadinta nolosha dad u dhashay Maraykanka iyo Sacuudiga. Saraakiil badan oo hadda shaqeeya iyo kuwo hore ayaa yaqaana oo xushmeeya.”